Nhau dzeBhaibheri: Masvingo eJeriko - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEstonia Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen (Cyrillic) Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Ukrainian Umbundu Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Chii chiri kukoromora masvingo aya eJeriko? Anenge arovanywa nebhomba guru. Asika mumazuvawo vanga vasina mabhomba; vanga vasina kunyange pfuti. Ndirimwe nenji raJehovha. Ngatinzwei kuti zvakaitika sei.
Terera chinoudzwa Joshua naJehovha: ‘Iwe navarume vako vanorwa muchapoterera guta. Ripotererei kamwe chete zuva rimwe nerimwe kwamazuva matanhatu. Potererai neareka yesungano. Vaprista vanomwe vanofanira kufamba mberi kwayo vachiridza hwamanda dzavo.
‘Pazuva rechinomwe munofanira kupoterera guta kanomwe. Tevere ndokuridza nguva refu hwamanda, uye itai kuti ari wose adanidzire nokudanidzira kukuru kwehondo. Ipapo masvingo achakoromoka!’
Joshua navanhu vanoita zvataurwa naJehovha. Pavanopoterera, ari wose akati mwi-i. Hapana anotaura shoko. Chinongonzwika bedzi ndiko kurira kwehwamanda nomutsindo wetsoka dzinofamba. Vavengi vavanhu vaMwari muJeriko vanofanira kuve vaitya. Ungaona here bote iro rinorembera pawindi? Iwindi raaniko? Hungu, Rakabhi aita zvaakaudzwa kuita netsori mbiri. Mhuri yokwake yose iri mukati ichiona pamwe naye.
Pakupedzisira, pazuva rechinomwe, pashure pokupoterera guta kanomwe, hwamanda dzinorira, vanhu vokurwa vanodanidzira, masvingo anokoromoka. Ipapo Joshua anoti: ‘Urayai munhu ari wose muguta ndokuripisa. Pisai chinhu chiri chose. Chengetai bedzi sirivha, ndarama, ndarira nedare, ndokuzviisa mupfuma yetendi raJehovha.’
Kutsori mbiri, Joshua akati: ‘Pindai mumba yaRakabhi, uye mubudisei nemhuri yokwake yose.’ Rakabhi nemhuri yokwake vanoponeswa, sokumupikira kwakanga kwaita tsori.
Jehovha anoudza varume vari kurwa uye vaprista kuti vaitei kwemazuva matanhatu?
Varume vacho vanofanira kuitei pazuva rechinomwe?
Sezvaunoona pamufananidzo, chii chiri kuitika kumasvingo eJeriko?
Nei paine tambo tsvuku yakarembera nepahwindo?
Joshua anoudza varume vari kurwa kuti vaitei kuvanhu vacho neguta ravo, asi zvakadini nesirivha, ndarama, ndarira, nedare?
Tsori mbiri dzinoudzwa kuti dziitei?
Verenga Joshua 6:1-25.
Kufamba kwevaIsraeri vachipoterera Jeriko musi wechinomwe kwakafanana sei nebasa rokuparidza reZvapupu zvaJehovha mumazuva ano okupedzisira? (Josh. 6:15, 16; Isa. 60:22; Mat. 24:14; 1 VaK. 9:16)
Uprofita hwakanyorwa pana Joshua 6:26 hwakazadzika sei anenge makore 500 gare gare, uye izvi zvinotidzidzisei nezveshoko raJehovha? (1 Madz. 16:34; Isa. 55:11)
NYAYA DZOMUBHAIBHERI DZINE MIFANANIDZO
Rakabhi Anoteerera Zvaanoudzwa
Guta reJeriko parakaparadzwa kwakangopona mhuri imwe chete.